Qaramada midobay oo lacago ugu deeqaysa dadka Somaliyeed. – The Voice of Northeastern Kenya
Qaramada midobay oo lacago ugu deeqaysa dadka Somaliyeed.
Star FM January 17, 2018
Raisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali kheyre ayaa magaalada Muqdisho kaga qeyb galay Kulan looga hadlayay Qorshaha Arimaha Bini’aadanimada Soomaaliya ee sanadka 2018 oo ay soo qaban qaabisey Qaramada midoobey.
Waxaa sidoo kale kulankaan ka qeyb galay Masuuliyiin ka tirsan jimciyada qaruumaha ka dhexaysa, Midowga Afrika, ururo Caalami ah iyo Hay’adaha Xuquuqul insaanka ee dowlada fedraalka Soomaaliya
Raisul wasaare Xasan cali Kheyre ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka soo wanaagsaneyso dhinacyo ay ka mid tahay xuquuqul insaanka Marka loo Eego sida meesha looga saarey Dhacdooyinka Bini’aadanimada ee ka dhici jirey Degaanada Soomaaliya sida kufsiga jirdilka iyo Waxyaabo kale oo ay wajihi jireen qaybaha bulshada Somaliyeed.
Masuuliyiinta Qaramada midoobey ayaa sheegay in loo baahan yahay Hal dhibic Lix Bilyan Oo doollar US$1.6 Billion si loogu Caawiyo Shan dhibic Afar milyan oo Qof oo Somali ah kuwaasoo u baahan Gargaar bini’aadanimo.
Dhanka kale Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxaa maanta ka furmay shir looga hadlayo abaarahii dalka Somalia ka dhacay sanadihii 2016 iyo 2017 waxaana ka qeybgalaya Agaasimaha Guud ee Wasaaradaa Qorsheynta Dowladd Federaalka, la taliyaha Horumarinta dhaqaalaha iyo cilmi barista, Wasiirka Qorsheynta, Agaasimayaasha Guud Ee Wasaaradaha maamul gobaleedka koonfur galbeed Somaaliya.
Shirkan ayaa inta uu socdo waxaa lagu eegayaa qiimeyn laga sameeyay abaarahii dalka Somalia ka dhacay dhibaatada ay geysteen, sida looga gaashaaman karo iyo qodabo kale.
Masuulayiinta ka socday Wasaaraddaha maamul Gobaleedyad ayaa talooyin la wadaagi doona madaxda wasaaradda qorsheynta ee ku sugan magaalada Baydhabo,taasoo ku aadan wax ka qabashada abaaraha Somalia ku soo laab laabta.
← Maamulka Koonfur Galbeed oo Sheegay inay Gacanta Ku Dhigeen rag Al-shabaab ka tirsan.
450 qof shacab ah oo Yemen lagu dilay bishii Disembar ee sanadkii tagay →